Hagaha Shahaadada Red Hat - Guud & Wadooyinka Xirfadaha | ITS Tech School
Tilmaamaha Hagaha ee Hagista Lahaanshaha Red Hat
#1. Engineer Red Hat Engineer, Maamulaha iyo Qoraallada Shahaadooyinka
#2. Maamulaha Nidaamka Lagu Caawiyo Red Hat ama RHCSA
#3. Engineer Red Hat Shahaadada ah (RHCE)
#4. Mashruuca Red Hat Certified
#5. Red Hat Developer iyo Maamulaha Codsiyada Maamulaha
#6 .Red Khadka Halka iyo Maamulaha Iskuduwaha Maamulaha
Shaqooyinka La Xiriira Casriga iyo Xirfadaha
Red Hat, magac magaciisu yahay jidadka IT-da, wuxuu bixiyaa noocyo kala duwan oo kakan oo ku saabsan qaabaynta, kaydinta, daruuriga ku salaysan iyo asxaabteeda 'nidaamyada qaaska ah ee khaaska ah. Shahaadooyinkan waxay leeyihiin khibrad aad u wayn oo laga qabo codsiyada waaweyn iyo kuwa kala duwan.
Waqtiga xaadirka, in ka badan 90% ururada Fortune 500 waxay qadariyaan waxyaabaha ugu muhiimsan ee barnaamijkan furfuran. Isticmaalka sarre wuxuu xaqiijinayaa qiimaha shahaadada Red Hat sidoo kale. Khubarada la aqoonsan yahay ee Red Hat ayaa la raadsadaa kadibna lagu shaqaaleeyaa ururada dabiiciga ah ee ku jira xaalad ah ilbiriqsi.
Haddii ay dhacdo in cabiradani iyo xogta xiriirka ah ee la xiriirta xirfadahaa ay sii kordhisay xiisahaaga si aad uga fikirto shahaadooyinkan? Hagahayaga ayaa kaa caawin kara:
Shahaado sharafeedkan, Red Hat, wuxuu u muuqday mid keligiis ah si loo hagaajiyo maamulka nidaamka iyo horumarinta fudud. Shahaadooyinkan waxaa loogu talagalay inay ku habboonaadaan nuxurka kormeeraha nidaamka, qaadida naqshadeeyayaasha, injineernimada, iyo dhismayaasha. Waxaa intaa dheer bartilmaameed u ah maamulka adeegsigalinta kuwaas oo intooda badan faa'iido u leh aasaaska IT-ga iyo qaadashada hagista jihada RHEL (Red Hat Enterprise Linux). Si aad u soo bandhigto codsadayaasha ugu awoodda badan ee isticmaalka RHEL, shahaaddadu waxay u baahan tahay in si dhab ah u lug lahaasha qalabka iyo nidaamka Red Hat. Aasaasiyadaha sida Solutions Innovative Technology waxay xaqiijinayaan in codsadayaashu ay yar yahiin fahamka gacmeedyada ku saabsan dhabarka rasmiga ah ee Red Hat.
Magaca calaamadku wuxuu qeexayaa rasiidka rasmiga ah ee Red Hat ka dib marka codsaduhu uu nadiifiyo barnaamijka shahaadaynta iyo inuu dhammeeyo fahamka hoose ee fahamka Red Hat items. Si loo helo miisaanno duulimaad ah ee baaritaanka, taxaddar taxadar leh Red Hat diyaarinta waa la soo jeediyey.
Marka la dhammeeyo hirgalinta shahaadada Red Hat, waxaad ku dhamaan doontaa inaad noqotid xirfadle Red Hat oo aqoon leh. Marka laga reebo furfurnaan fara badan iyo mushahar aad u sareeya, waxaad ku dhamaan doontaa shakhsi ahaan kooxda Red Hat, koox la yiraahdo shakhsiyaadka asturnaanta ah. Shahaadada Red Hat Linux oo ka timid hay'ad la aamini karo ayaa dhammaantiin ku siin kara.
Maqnaanshaha injineerada Red Hat, guddoomiyeyaasha iyo culimada ayaa aad u sarreeya marka la barbardhigo qaybaha kale. Marka la eego racfaankaas, hay'addu waxa ay sameysey samaynta horumarin shahaadooyin gaar ahaan khaasatan khubarrada sida ay ahaayeen. Shahaadada 'Red Hat Certified' ee xirfadlaha ah waxaa buuxin kara Maamulayaasha Nidaamka, Dhismayaasha, Maamulayaasha Soodhaweynaha, Engineers iyo JBoss Administrator, iyo wixii la mid ah, iyada oo la marinayo shahaadada muhiimka ah. Sidoo kale, waxaad ka soo qaadan doontaa murugo aad u soo jiidanayso Red Hat-yada Linux iyo fahan-celinta muhiimka ah.
Waxaa la soo jeediyey in la siiyo xaqiijin maamulayaasha la soo dhameeyay, kuwaas oo qaadan kara tallaalka Red Hat si fiican. Waxaa intaa dheer, waxaa loo tixgelinayaa in horey loo maro in uu noqdo Engineer Red Hat Certified Engineer sababta oo ah waa lagama maarmaan in lagu fariisto Imtixaanka RHCE. EX200, oo ah imtixaan daqiiqad ah 150, ayaa looga baahan yahay inaad dabaysho RHCSA.
Fursadda aad ka dhigan tahay inaad sameysid maamulka Windows, xirfadaha aad doorbidid waa Maamulka I (RH124) iyo II (RH134). Mar labaad, tartamayaasha maamulka Linux waxay u baahan yihiin inay qaataan RH199 ie Koorsada Kedis ah.
Ma jiraan wax xaddidan oo ku saabsan aqoonta iyo xasuusinta xaqiiqa la mid ah, Shirkadda Red Hat Certified Engineer ama shahaadada RHCE ayaa u muuqatay. Waxaa asal ahaan loo sameeyey maamulayaasha nidaamka halyeeyada iyo maamulayaasha. Si loo soo qaado shahaadadan, waa in uu haysto shahaadada RHCSA. RHCE-da oo diyaarinaya qorshe la isku raacay ayaa gabi ahaanba waafaqsan nidaamkaaga horey u-qabashada. Haddii ay dhacdo in aad tahay madaxa Windows oo leh kulan Linux ah ka dibna barnaamijka Red Hat System Administration I iyo II waa adiga kugu habboon.
Mar labaad, madaxa Linux / UNIX oo leh ka qayb qaadasho shaqo muddo ka badan hal sano waxay u aadi kartaa koorsada RHCSA Rapid Track Course ama RH199 iyo koorsooyinka Nidaamka Casriga ee III ama RH254.
Si aad u noqotid aqoon yahan aqoon leh ee RHCE, waa inaad sameysid saacadda 3.5 Linux 7 ee ku salaysan RHCE imtixaankoodu, kaas oo koodhka imtixaanka uu yahay EX300. Dammaanad dhammaystiran oo ku saleysan diyaarinta magaca magaca lagu kalsoon yahay sida Koenig ayaa kaa caawin doonta in aad iska hubiso imtixaanka shahaadaynta hal goor.
Shahaadada ka mid ah shahaadada ugu weyn ee loo yaqaan 'Red Hat' waa shahaadada RHCA. Iyadoo la fiirinayo suurtogalnimada ugu badan iyo codsiyada, waxay si joogto ah ugu yeereysaa caddaynta cadadka ee Red Hat. RHCE ama RHCJD waa baahiyihii hore ee shahaadadan.
Tababarayaasha waxay ka soo qaadan karaan fasalada la socda, inta ay u socdaan RHCA:
Ku biiray khabiirada Gudbinta Codsiyada Qeybta Dhexe ee JBoss Enterprise, shahaadadani waxay ka timaadaa laba nooc:
Wixii JBoss Administrator - RHCJA
Dadka ka shaqeyn doona barnaamijka Java Enterprise Edition (JEE) waxay u tegi karaan shahaadada RHCJD. Mar labaad, shakhsiyaadka heysta dhalashada ee soo bandhigida iyo kormeerka Codsiga Ganacsiga Red Hat JBoss ayaa u tegi kara shahaadada RHCJA.
Hagaajinta dariiqa, ururku wuxuu bixiyaa shahaadada Maamulka Sancada, oo ay weheliso shahaadooyinka daruuriga ah. Khabiirada leh barasho xoog leh iyo aqoonta la xidhiidha isticmaalka kaabayaasha farsamada, martida, iyo martida isticmaalka Redis Enterprise Virtualization waxay u tegi kartaa shahaadadan.
Sida aan ku wargelinnay in dhammaan xayeysiinta Fortune 500 ay ku wareejinayaan horumarinta barnaamijka Red Hat iyo barnaamijka furan ee furan, ma jiraan wax khasaare ah oo loogu talagalay khabiirada Red Hat. Maamulayaasha Red Hat System iyo injineeriyada nidaamka Linux ayaa ah qaababka ugu waxtarka leh ee loogu talagalay khabiirada Red Hat.
Raadinta Red Hat Linux waa horumar la taaban karo oo tiro badan oo ka mid ah ururada ayaa sii degaya tan. Abaabulidda barashada Internetka Barnaamijka Kombuyuutarada ee Iskudhafka yar (ISCSI), nidaamyada koorsooyinka dhismaha iyo nidaamyada nidaamka, tusaale ahaan, Faylka Wareejinta Faylka (FTP), injineernimada nidaamka Red Hat Linux waa aasaaska ururka. Waxay aad u xeelad badan u yihiin inay soo gudbiyaan soo jeedimaha casriga ah ee RHEL xaalad ah waqtiyo. Ururadu waxay ka fekeraan inay yihiin khayraadkooda ugu qiimaha badan.
Sidan, maanta dooranaya shahaadada Red Hat Linux iyo noqo qayb ka mid ah kooxda horumarsan.